Rasaasa News – 42,000 oo Guryo (Apartments) Cusub ah oo Laga Dhisayo Addis Ababa
on January 13, 2012 3:39 pm
Addis Ababa, January 13, 2011 [ras] – Duqa magaalada AddisAbaba Kuma Demkesa, ayaa dhagax dhigay dhismo guryo degaan oo cusub tiradooduna tahay 42,000 oo guri lagana dhisayo 16 dhinac oo caasimada ku yaal.
Maamulka magaalada Mr Kuma, ayaa sheegay in ay mudnaanta siinyaan ku guulaysashada dhismayaashan cusub ee guriyeynta magaalada Addis Ababa. Mashruucan dhismaha guriyaynta ee cusub ayaa la filayaa in kolka uu dhamaado uu wax ka qaban doona dhibaatada guri la,aanta caasimada, abuurina doono shaqooyin cusub.
Magaaladu waxay rajaynaysaa in 80% ay dhamaystirto dhismahan mashruuca sanadkan socda, iyada oo ay ku baxayso lacag lagu qiyaasay 6.7 bilyan oo Birr.
Waxaa la filayaa in qiyaas ahaan 300,000 oo qoys oo degan magaalada Addis Ababa lagu meelayn doono dhismaha guriyeyntan cusub.
856 Qandaraasle oo Addis Ababa degan ayaa mudnaanta leh, lana siiyo doonaa tababar, kuwaas oo maamuli doona dhismaha.
Waxaa xusuus mudan in maamulka Addis Ababa ka helay dayn ah 4,4 bilyan Birr Baanka Ganacsiga Ethiopia, si uu maamulku ugu isticmaalo mashruuca horumarinta guriyeynta. Lacagtan waxaa loo isticmaali doonaa dhismaha in ka badan 40,000 oo guriyeyn ah oo la dhisayo sanadkan.
Heshiiska lacagta daynta ah ee lagu dhisayo guryaha, waxay dhexmartay mashruuca horumarinta guriyeynta iyo Baanka Ganacsiga, waxaa la sixiixay bishii September 27, 2011, lacagtan waxaa lagu celinayaa mudo 4 sano ah heshiiska ka dib dulsaar ah 6%.
Baahida guryaha iyo qurxinta magaalooyinka ayaa ka jirta magaalooyinka Ethiopia, si waxlooga qabtan dawladu waxay samaysay maamul magaalooyin si loo dedejiyo horumarinta magaalooyinka iyo baahida bulshada.
Arinkan waxaa helay sanadkii ina Dhaafay afar magaalo oo ka mid ah degaanka Somalida Ethiopia, kuwaas oo aan wali wax dhaqdhaqaaq dhisma ah laga samaynin, laakin la sugayo in wax dhaqaaqaan.